Uncategorized – MMANIME
Mobile Suit Gundam Hathaway U.C. 0105 ခုနှစ် ဒုတိယ Neo Zeon စစ်ပွဲ (Char ၏ပုန်ကန်မှု) အပြီးတွင် (၁၂) နှစ်အကြာ။ လူသားမျိုးနွယ်နဲ့ Universal Century ရဲ့အနာဂတ်ကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့ “Axis Shock” အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပြီးနောက်မှာတောင် ပဋိပက္ခတွေဟာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။ Earth Federation အစိုးရကလည်း ယခင်ကထက်ပိုမိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ Earth Federation အစိုးရဟာ ကမ္ဘာမြေကို အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းစေရုံတင်မကဘဲ အရပ်သားတွေကို အာကာသထဲ အတင်းအကြပ်နှင်ထုတ်တဲ့ လူမဆန်တဲ့ "Man Hunting" မူဝါဒကိုပါကျင့်သုံးနေခဲ့ပါတယ်။ Mafty Navue Erin လိုခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက် ဦးဆောင်တဲ့ Earth Federation အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ Mafty ဟာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ Mafty ဟာ Federation အစိုးရအရာရှိတွေကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပစ်ပြီး အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Mafty ဟာ Federation အစိုးရကိုအလိုမရှိတဲ့ လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကို ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Mafty ဆိုတဲ့အဖွဲအစည်းကိုဦးဆောင်တဲ့ Mafty Navue ...
Her Blue Sky Her Blue Sky အထက်တန်းကျောင်းသူလေး Aoi Aioi ဟာသူမရဲ့ မိဘတွေ မတော်တဆမှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူမ၏ အမကြီးဖြစ်သူ Akane နဲ့အတူ နေထိုင်ခဲ့တယ်။ Aoi ဟာဘွဲရပြီးတဲ့နောက်မှာ Akane ရဲ့ex ဖြစ်သူ Shinno လိုခေါ်တဲ့ Shinnosuke Kanamuro ရဲ့လှုဆော်ပေးမှုကြောင့် သူမ၏အမ ဝန်မလေးအောင် ဂီတလုပ်ငန်းတစ်ခု ရှာရန် Tokyo ကိုပြောင်းချင်ခဲ့တယ်။သူဟာ တီးဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ အဖွဲဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး Akaneရဲ့မိဘတွေ ကွယ်လွန်သွားတဲ့နောက်မှာ ဂီတာတီးကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန် Tokyo ဆီကိုထွက်ခွာခဲ့ပြီး သူတိုဟာ ပြန်မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။ တစ်နေ့လယ်ခင်းမှာတော့ Aoi ဟာဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ဂီတာတီးလေ့ကျင်နေချိန်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ 13နှစ်က Shinno ရဲ့ 18နှစ် အရွယ်ပုံစံ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီး ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။ တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲ အသက်၃၁နှစ်ရှိတဲ့ လက်ရှိ Shinno ဟာလည်း မြိုကိုပြန်လာပြီး ...
Children of the Sea ပင်လယ့်ရင်သွေး .......................... အားလုံးပဲ စိတ်ဝင်စားလောက္မယ့်ကားလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးပါရစေ ဒီကားမှာထူးခြားတာက မြန်မာပြည်ဖွား ဂျပန်မှာကြီးပြင်းတဲ့ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း ခေါ် အဝင်းဟာ ဒီကားမှာအသံသရုပ်ဆောင်ထားတာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ တခါက ပင်လယ်ပြင်ကနေကောင်လေးနှစ်ယောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် သူတို့ဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းမမှတ်မိကြသလို သူတို့ပုံစံဟာလူသားပုံဖြစ်ပေမယ့် လူသားနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ် တနေ့မှာဥက္ကာပျံကြီးကမ္ဘာမှာဖြတ်သန်းသွားပြီး ငါးတွေသောင်လာတင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက္မှာတော့ ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ် Translated by DrNyan IMDb 6.5/10 Rotten Tomatoes 61% Metacritic 71%
Assassination Classroom Story continues with the students' own conflicts, Koro Sensei’s identity and the of the world. The time limit for assassination is approaching.
Dragon Ball: Sleeping Princess in Devil’s Castle Imdb 7/10 ဂျပန်Animeလို့ပြောလိုက်ရင် အရင်ဆုံးပြေးမြင်ကြတာ Doraemonနဲ့ Dragon ballလိူ့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး နှစ်ခုလုံးဟာ ၁၉၈၀လောက်ကထွက်တယ်ဆိုပေမယ့် အခုခေတ်ကာလတိုင်အောင် အရှိန်မသေသေးပဲ နာမည်ကြီးဆဲပါ Animeလောကမှာ Dragon ball animeထွက်ခဲ့ခြင်းဟာ Animeလောကအတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် နာမည်ကြီးanime seriesတွေဖြစ်တဲ့ One pieceတို့ Narutoတို့ရဲ့ဖန်တီးရှင်တွေဟာ Dragon ball animeရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့တွန်းအားကြောင့် နာမည်ကျော်စီးရီးတွေကိုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တာပါ နောက်ပြီးတော့ Dragon ball ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင် Son Gokuဆိုတာ အနောက်သိူ့ခရီးသွားခြင်းပုံပြင်ထဲက စွန်းဝူခုန်းကိုအခြေခံပြီးရေးစွဲထားတာပါ တရုတ်ကထုတ်တဲ့ဂန္ဓဝင်အနောက်သို့ခရီးသွားခြင်းရိုက်ဖြစ်တာကလည်း Gokuဇာတ်ကောင်အောင်မြင်ခဲ့တာကတွန်းအားသေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ် Dragon ball animeဟာ စီးရီးနဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်တယ်ဗျ အခုတင်မယ့် အစားကြူ းဘုရင်နှင့်မျောက်လောင်းမှာ bulmaနဲ့စတွေ့တာဟာ စီးရီးမှာbulmaနဲ့စတွေ့တာနဲ့ မတူပဲ နည်းနည်းလေးကွဲပါတယ် စီးရီးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပေမယ့် အပိုင်းအရေအတွက်များလွန်းတာရယ် တော်တော်ကြာပြီဖြစ်လို့ရှာရခက်တာရယ်ကြောင့်မတင်ပေးနိုင်ဖို့များပါတယ် စီးရီးကြိးပဲကိုသိသလောက် Dragon ball Dragon ball z Dragon ball super Dragon ball ...
Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies Imdb 7/10 ဂျပန်Animeလို့ပြောလိုက်ရင် အရင်ဆုံးပြေးမြင်ကြတာ Doraemonနဲ့ Dragon ballလိူ့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး နှစ်ခုလုံးဟာ ၁၉၈၀လောက်ကထွက်တယ်ဆိုပေမယ့် အခုခေတ်ကာလတိုင်အောင် အရှိန်မသေသေးပဲ နာမည်ကြီးဆဲပါ Animeလောကမှာ Dragon ball animeထွက်ခဲ့ခြင်းဟာ Animeလောကအတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် နာမည်ကြီးanime seriesတွေဖြစ်တဲ့ One pieceတို့ Narutoတို့ရဲ့ဖန်တီးရှင်တွေဟာ Dragon ball animeရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့တွန်းအားကြောင့် နာမည်ကျော်စီးရီးတွေကိုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တာပါ နောက်ပြီးတော့ Dragon ball ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင် Son Gokuဆိုတာ အနောက်သိူ့ခရီးသွားခြင်းပုံပြင်ထဲက စွန်းဝူခုန်းကိုအခြေခံပြီးရေးစွဲထားတာပါ တရုတ်ကထုတ်တဲ့ဂန္ဓဝင်အနောက်သို့ခရီးသွားခြင်းရိုက်ဖြစ်တာကလည်း Gokuဇာတ်ကောင်အောင်မြင်ခဲ့တာကတွန်းအားသေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရရင်... ခဏလေးဗျ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုမပြောခင် Dragon ball animeဟာ စီးရီးနဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်တယ်ဗျ အခုတင်မယ့် အစားကြူ းဘုရင်နှင့်မျောက်လောင်းမှာ bulmaနဲ့စတွေ့တာဟာ စီးရီးမှာbulmaနဲ့စတွေ့တာနဲ့ မတူပဲ နည်းနည်းလေးကွဲပါတယ် စီးရီးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပေမယ့် အပိုင်းအရေအတွက်များလွန်းတာရယ် တော်တော်ကြာပြီဖြစ်လို့ရှာရခက်တာရယ်ကြောင့်မတင်ပေးနိုင်ဖို့များပါတယ် စီးရီးကြိးပဲကိုသိသလောက် Dragon ball Dragon ball z Dragon ...
Asagao to Kase-San(Ova) Asagao to Kase-san(ova) ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ yuri animeေလးတင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ဗ်ာအပင္စိုက္ရတာကို ဝါသနာပါၿပီး အတန္းထဲမွာလည္း အေနေအးတဲ့ Yui Yamadaနဲ႔ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသူေလးနဲ႔ အတန္းထဲမွာ popular ျဖစ္ၿပီး ေယာက္်ားဆန္တဲ့ Tomoka Kaseတို့ရဲ့ ရင္ခုန္စရာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးကို ၾကည့္ရွုရမွာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာဒီဇာတ္လမ္းေလးကို ဘာသာျပန္သူကေတာ့ Thatoeျဖစ္ပါတယ္
IMDB: 6.2/10/10 6,2/10 votes
Mobile Suit Gundam: The Origin V: Clash at Loum ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံးသော စစ်ပွဲကြီးဟာ စခဲ့ပါပြီ။ ဒီစစ်ပွဲဟာ အဆိုးရွားဆုံးစစ်ပွဲလို့ ဘာလို့နာမည်တွင်နေရတာလဲ? Zeon လို ကိုလိုနီတစ်ခုအနေအထားနဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရကို ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှာလဲ?Char Aznable အနေနဲ့ရော တပ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘာတွေစွမ်းဆောင်နိုင်ဦးမှာလဲ? ဆိုတာတွေကို ဒီအပိုင်းမှာ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲရဲ့ဆိုးရွားပုံတွေကို သေချာမြင်တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ DOWNLOAD ( MEDIA FIRE ) Translated and Encoded by Oke Hmue Ko
Made in Abyss Movie 1: Tabidachi no Yoake ဒီကားလေးကတော့ Made in Abyss Series ကို Movie အနေနဲ့ပြန်ရိုက်ထားတာပါSeries ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ မထူးစမ်းလောက်ပေမဲ့ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်Abyss ဆိုတာက ကမ္ဘာ့အတွင်းဆုံးအနက်ဆုံးအထိကို ပေါက်နေတဲ့တွင်းနက်ကြီးလို့ဆိုရပါမယ်အဲ့တွင်းကြီးရဲ့အောက်ဆုံးမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး ဒါပေမဲ့တွင်းနားတစ်ဝိုက်မှာတော့ သတ္တဝါမျိုးစုံကိုတွေ့ရပြီး ထူးစမ်းတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့တာလဲဆိုတာရှာဖွေကြဖို့ တူးဖော်သူတွေဟာ အကြောက်အလန့်မရှိ အမှောင်ဖုံးနေတဲ့တွင်းနက်ကြီးထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတူးဖော်သူတွေထဲမှာတွင်းနက်ကြီးထဲကနေပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိသလို သတင်းအစအနတောင်မရနိုင်တော့တဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေထဲကမှ ပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆရတဲ့ အဖြူရောင်ဝီစီပိုင်ရှင် Annihilator ရဲ့ သမီး Riko ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက သူ့အမေမသေသေးဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ သူ့အမေကိုပြန်ရှာဖို့ Abyss ဆိုတဲ့တွင်းနက်ကြီး ခရီးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့အတူ Reg ဆိုပြီး သူနာမည်ပေးထားတဲ့စက်ရုပ်ကောင်လေးလည်းပါလာခဲ့ပါတယ်Riko တစ်ယောက်သူ့အမေကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားသွားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Lupin the Third: Goemon Ishikawa’s Spray of Blood Centered on the character of Goemon, this film isasequel to the spin-off TV series, "The Woman Called Fujiko Mine" and its sequel film, "Daisuke Jigen's Gravestone." Lupin ဆိုရင္မသိတဲ့မရိွသေလာက္ကို႐ွားပါတယ္ ဒီကားေလးကေတာ့ Lupin ကိုအဓိကထား႐ိုက္တာမဟုတ္ဘဲ Goemon အေပၚဇာတ္လမ္းအသားေပး႐ိုက္ထားတဲ့ကားေလးတစ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း- "ဘာျမဴဒါ-တေစၦ"လို႔နာမည္ႀကီးတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေပ်ာ္ကြယ္ေနရာကေနမွအေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ Lupin တို႔ကိုလိုက္သတ္ဖို႔ျဖစ္လာၿပီးလူေ႐ွ႕ကို႐ုပ္လံုးထြက္ျပလာခဲ့ပါတယ္ Lupin တို႔ဟာ Tetsuro ရဲ႕ဂိုဏ္းရဲ႕ေလာင္းကစားသေဘာၤေပၚမွာမီးခံေသတၱာေဖာက္ဖို႔ၾကံစည္ေနၾကခ်ိန္မွာ"ဘာျမဴဒါ-တေစၦ"လို႔ေခၚတဲ့"Hawk"ေရာက္လာၿပီးသေဘာၤကိုဖ်က္စီးခ်ိန္မွာေတာ့မေမ်ွာ္လင့္ဘဲ Goemon နဲ႔ရင္ဆိုင္ရဖို႔ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့...ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္႐ွဴရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္
IMDB: 7,7/10 79 votes
One piece Strong World သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ Imepl Downကနေထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့တစ်ဦးထဲသောပင်လယ်ဓါးပြကြီး‌ရွှေခြ‌င်္သေ့Shikiဟာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီးနှစ်20အကြာမှာ marineတွေကိုဗျင်းဖို့ပြန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကမ္ဘာ့အစိုးရကိုသူ့ရှေ့ဒူးထောက်စေအောင်လုပ်မယ့်shikiဟာ ကောက်ရိုးဦးထုပ်အဖွဲ့နဲ့ထိပ်တိုက်တိုးမိပါတယ်။ ကောက်ရိုးဦးထုပ်အဖွဲ့ထဲက namiရဲ့အရည်အချင်းတွေသဘောကျသွားပြိးဖမ်းခေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကောက်ရိုးဦးထုပ်တို့တွေနဲ့ငြိကုန်ပါတယ်။ ကောက်ရိုးဦးထုပ်တွေအနိုင်ယူနိုင်မလားNamiကိုပြန်ခေါ်နိုင်မလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြပါ Translate &Encode by Gold Channel Link here
One Piece Adventure Of Nebulandia Synopsis မဂၤလာပါ One Piece ပရိသတ္တို႔ေရ အခုတစ္ေခါက္တင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ Special Episode Movie တစ္ခုပါပဲ ဒီကားေလးလည္း ဘယ္မွာမွမ႐ွိေသးဘူးလို႔ယူဆမိပါတယ္ဒီေတာ့ ေတာင္းဆိုထားတဲ့သူေတြလည္း ေတာင္းရက်ိဳးနပ္ပါၿပီလို႔ေနာ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကိုေျပာျပရင္….Water7မေရာက္ခင္ Luffy တို႔ Foxy Pirates ေတြနဲ႔ တစ္ပြဲတစ္လမ္း အကဲစမ္းၾကရင္း Chopper ဟိုဘက္အသင္းထဲ ပါသြားတာ မွတ္မိၾကအံုးမွာပါ အ့လို ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ အႏိုင္တစ္ပြဲရရင္ ႏိုငိတဲ့သူက ႐ွံုးတဲ့သူဘက္က အဖြဲ႔သားတစ္ေယာက္ေခၚခြင့္႐ွိပါတယ္ အ့ကစားပြဲကို Davy Back Fight လို႔ေခၚပါတယ္အခုဒီမွာလည္း Foxy Pirates ေတြက Luffy တို႔ကို ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းေပၚမွ်ားေခၚၿပီး Davy Back Fight ၿပိဳင္ပြဲလုပ္ဖို႔ ျပန္စိန္ေခၚခဲ့တာပါၿပိဳင္ပြဲလုပ္ၾကရင္း Luffy တို႔ အဖြဲ႔သားႏွစ္ေယာက္ Foxy ဖက္က အဖြဲ႔သားႏွစ္ေယာက္ေရတပ္ဖမ္းသြားတာ ေခၚခံရခ်ိန္မွာေတာ့…..ဘယ္လိုေတြေ႐ွ႕ဆက္ၾကမလဲ ျပန္ကယ္ႏိုင္မွာလား ဘယ္လိုတိုက္ကြက္ေတြ နဲ႔ ဘယ္လို ဟာသေတြေဖာက္မလဲဆိုတာေတာ့……. Review,Translate&Encode ...
One Piece Alabasta ဒါကတော့ စီးရီးမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Alabasta Arcကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့ပြန်ထွက်တာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Warlordတစ်ပါးဖြစ်တဲ့Crocodileချယ်လှယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့Alabastaတိုင်းပြည်ကိုကောက်ရိုးဦးထုပ်တို့တွေဝင်ကယ်ကြမှာပါ Alabasta